Goobta iyo goorta lagu balansan yahay Ballon d’Or, xiddiga hoggaanka u haya tartanka & Wax walba oo aad uga baahantahay abaal-marinta Kubadda Dahabka – Gool FM
(France) 29 Nof 2021. Waxaa caawa lagu madalsan yahay xafladda weyn ee lagu bixinayo abaal-marinta Ballon d’Or 2021 iyadoo ay u sharraxan yihiin qaar ka mid ah xiddigaha ugu sarreeya kubadda cagta xilliga sida Lionel Messi, Robert Lewandowski, Karim Benzema iyo Cristiano Ronaldo.
Sanadkii lasoo dhaafay ee 2020 ayay baaqatay abaal-marintan sababo la xiriira xanuunkii dunida aafeeyay ee Korona Fayras kaasoo awgii dadyowga dunida ay awoodi waayeen inay isu imaadaan ama xaflado sameystaan.
Xiddigaha ugu cad-cad
Lionel Messi iyo Robert Lewandowski ayaa ah xiddigaha carrabka lagu wada hayo, waxayna labada xiddig sameeyeen qaab-ciyaareed ay ku muteysteen inay noqdaan musharraxiinta ugu horreeya, waxaase tartanka si aanan awood badan ku jirin uga qayb ah Jorginho, Karim Benzema iyo Cristiano Ronaldo.
Sida lagu ogaaday warar laga helay dalka Faransiiska oo ay xafladda ka dhaceyso caawa, Messi ayaa hor kacaya dhanka codadka waxaana xusid mudan inuu laacibkan ugu dambeyn sanadkan ka baxay abaartii dhanka koobabka ka heysatay xulkiisa Argentina kaddib markii uu la qaaday Copa America 2021 isagoo noqday xiddiga tartanka, kan ugu goolasha badan iyo midka ugu sarreeya dhanka caawinta.
Halkee ayay ka dhici doontaa xafladda?
Xafladda Ballon d’Or oo ay soo qaban-qaabiso majaladda France Football ayaa ka dhici doonta masraxa Theatre du Chatelet oo ku yaalla magaalada Paris ee caasimadda Faransiiska.
Goormee ayay xafladdu bilaaban doontaa?
Saacadaha dunida ayaa kala duwan, taasoo xitaa keeneysa in qaar ka mid ah dalalka dunida gaar ahaan kuwa Asia ay taariikhdu u noqon doonto 30-ka November sida India oo 1:00 saqda dhexe ay u tahay xilliga xafladda.
Xafladdu waxay bilaaban doontaa 10:30 habeennimo xilliga Geeska Afrika.